MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ဧရာဝတီဆည်များနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်၏ CSR အစီရင်ခံစာ အသစ်အပေါ် ကချင်အဖွဲ့မှ ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချ
တရုတ်နိုင်ငံပိုင် China Power Investment (CPI) မှ ပါဝင်ပတ်သက်နေသော ဧရာဝတီမြစ်ဆုံအထက်ပိုင်း ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ (ACHC) သည် ၄င်း၏ “ဧရာဝတီဆည်များအပေါ် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ”တစ်စောင်ကို ပြီးခဲ့သည့်လတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာထဲတွင် ဆည်ကြီး ၇ ခုကို ဆောက်လုပ်နေသော ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည် ကချင်ပြည်နယ်အတွက်သာမက မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ပါ အကျိုး ရှိသော စီမံကိန်းတရပ်အဖြစ် အခိုင်အမာ ပြောဆိုထားသည်။
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း၏ လူမှုရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဆည်စီမံကိန်းအပေါ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှပင် CPI ၏ အစီရင်ခံစာသည် ဆည်စီမံကိန်း ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်ကြီးအား ခေတ်မီတိုးတက်စေမည်၊ ဒေသစီးပွားရေးအား အသွင်းပြောင်းစေမည်၊ ဒေသခံ ကချင်ယဉ် ကျေးမှုအား တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေမည် စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပြောဆိုနေသည်။
“တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးစရာ မလိုဘူး” ဟု ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးကွန်ယက်အဖွဲ့ (KDNG) မှ Tsa Ji မှ ဆိုသည်။ “ကျနော်တို့ရဲ့ ဒေသခံတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပုံစံကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုတယ်”။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ပျက်ပြားခဲ့ပြီးနောက် ထိုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသော မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းအား အပြီးအပိုင် ဖျက်သိမ်းပစ်ရန်အတွက် KDNG မှ ယခုတိုင် တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
သဘာဝသယံဇတဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာသည် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စေသည့် အဓိက သော့ချက်တခုဖြစ်သောကြောင့် ဆည်စီမံကိန်းအား ပြန်လည်စတင်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ရှိရင်းစွဲ ပဋိပက္ခအား ပိုမိုကြီးထွားစေမည့်အပေါ် KDNG မှ အထူး စိုးရိမ်သည်။ ထို့ပြင် ကြီးမားသည့် ဆည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ထိုမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ဆန့်ကျင်ကန့် ကွက်ခဲ့ကြ သော ဧရာဝတီမြစ်အောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှ ပြည်သူထူထုတရပ်လုံးအား ဒေါသထွက် စေသည်။
CPI ၏ အစီရင်ခံစာအသစ်အပေါ် KDNG ၏ တုန့်ပြန်ချက်များမှာ အထူးသဖြင့် အောက်ပါတုန့်ပြန်ချက်များဖြစ်သည်။
CSR အစီရင်ခံစာ >> ဆောက်လုပ်ရေးကာလနှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ဧရာဝတီဆည်စီမံကိန်းတခုလုံးမှ ရရှိမည့် ၀င်ငွေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၄ ဘီလီယံကို အခွန်ဘဏ္ဍာ၊ အခမဲ့စွမ်းအင်၊ အခမဲ့ ရှယ်ယာ စသည် တို့မှ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ ဘီလီယံ (ဧရာဝတီစီမံကိန်းမှ စုစုပေါင်းရရှိမည့်ဝင်ငွေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း) ကိုသာ ရရှိမည်။
KDNG>> လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ နေပြည်တော်မှ ဗဟိုအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝ သယံဇာတအားလုံးအား ပိုင်ဆိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် အာဏာရှိသည့်အပြင် စီမံကိန်းမှ ရရှိမည့် ၀င်ငွေအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူများသည် ဒေသခံများ၏ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် အခြားသဘာ ၀ သယံဇာတအားလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့် ထိန်းချုပ်ခွင့် ပိုမိုရရှိနိုင်စေရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေး အတွက် တောင်းဆိုနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း တည်ငြိမ်မှု မရှိသေးသည့် ကာလအတွင်း ဤစီမံကိန်းအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်းခြင်းသည် စစ်ပွဲနယ်မြေအတွင်း ပဋိပက္ခိပိုမိုကြီးထွားအောင် တွန်းအားပေးစေသည်။
CSR အစီရင်ခံစာ>> ACHC ကုမ္ပဏီသည် တာဝန်ယူမှုရှိသော ကုမ္ပဏတခုဖြစ်ပြီး လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစံနှုန်းများအတိုင်း စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နေပြီး ရိုးသားမှု၊ မျှတမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတည်းဟူ သော မူဝါဒအတိုင်း အမြဲတမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နေသည်။
KDNG>> ဆည်ကြီး ၇ ခုဆောင်လုပ်နေသော ဧရာဝတီစီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းစတင်သည့်အချိန်မှစ၍ ထိခိုက်ခံရသည့် လူမှု အဖွဲ့အစည်းကြီး၏ သဘောထားအား ရယူခြင်း၊ ဦးစားပေးခြင်းမရှိပဲ ဖုံးကွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စီမံကိန်းမလုပ်ခင် နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်နေသည့်ကာလအတွင်း ငွေကြေးဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ် သတင်းအချက်အလက်များ လုံးဝ မရှိသည့်အပြင် စီမံကိန်းဟာ လက်ခံအတည်ပြုခဲ့သည့် မြန်မာစစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက် ၍ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မျှ မရှိပေ။
CSR အစီရင်ခံစာ>> မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လာမည့် အနာဂတ်တွင် လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက် ကြီးကြီးမားမား မရှိသည့်အတွက် ကြောင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ မြောက်မြားစွာ တင်ပို့ရောင်းရန်နိုင်သည်။
KDNG>> မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ စွမ်းအင်တင်ပို့ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်စီမံကိန်းနှင့် ၄င်း၏ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခြင်း၊ အများဆန္ဒကောက်ယူခြင်းများ လုပ် ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
CSR အစီရင်ခံစာ>> မြစ်ဆုံဆည် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းသည် ခြောက်သွေ့ရာသီနှင့် မိုးရာသီကာလတွင်း ရေခမ်းခြောက်မှုအတွက် ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ ထို့ပြင် မြစ်ကြောင်းစီးဆင်းမှုအား တည်ငြိမ်စေပြီး ဧရာဝတီမြစ်၏ နှုန်းမြေဖြစ်ထွန်းမှုအား နှေးကွေးစေသည်။ ထို့ကြောင့် ဤစီမံကိန်းသည် ဆည်မြောင်းရေသွင်းရေး၊ ရေကြောင်းသွားလာရေးနှင့် နယ်လှည့်ခရီးသွားရေးအတွက် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည့်အပြင် မြစ်လယ်ပိုင်းနှင့် မြစ်အောက်ပိုင်းသို့ ပင်လယ်ရေ စီးနင်းဝင်ရောက်မှုမှ ခုခံကာကွယ်ပေးသည်။
KDNG>> မြစ်ဆုံဆည်သည် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးဆည်ဖြစ်သည်။ ဆည်မြောင်းရေသွင်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင် ထားသည့် ဆည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စီမံကိန်း အဓိက လုပ်ဆောင်သူနှင့် အဓိက သုံးစွဲသူဖြစ်သည် တရုတ် နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်၍သာ ဆည်ရေများကို မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသသို့ လွှတ်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ ရွှေလီနှင့် မဲခေါင်မြစ်ပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်ထားသော တရုတ်ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ဆည်များကြောင့် မြစ်အောက် ပိုင်းဒေသ အကျိုးသက်ရောက်မှု အတွေ့အကြုံများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် နွေရာသီတွင် ယခင်ထက်ပို၍ ရေခမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ် ကြုံရနိုင်သကဲ့သလို့ မိုးရာသီတွင်လည်း ရေကြီးခြင်းနှင့် ရုတ်တရက် ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ကို အချိန်မရွေး ပိုမိုဆိုးဝါးစွာ ခံရနိုင်သည်။
CSR အစီရင်ခံစာ>> အမဲလိုက်ခြင်း၊ သစ်ခုတ်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရွှေတူးဖော်ရေးတွင် လုပ်ကိုင်နေသော အချို့သော အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ၄င်းတို့၏ ရိုးရာ ကျွမ်းကျင်မှု အတတ်ပညာများကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤသို့အားဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ရင်ဆိုင်နေရသည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်အား လျော့ချနိုင်ပြီး ဒေသတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးကို မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
KDNG>> ဆည်ကြီး ၇ ခုဆောက်လုပ်မည့် ဧရာဝတီစီမံကိန်းအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြား ဆည်စီမံကိန်းများမှ ရရှိသည့် အတွေ့အကြုံများအရ ဧရာဝတီစီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်စေသည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း၏ ပထမအဆင့်တွင်ပင် ဒေသခံပြည်သူများသည် အတင်း အဓမ္မ နေရာပြောင်းရွှေ့ခံကြရပြီး ကြီးမားသည့် ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကို စတင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် မြစ်ဆုံအနီးတ၀ိုက် ကျယ်ပြန့်သော နေရာများကို ပျက်စီးစေခဲ့ပြီး ဧရာ ၀တီမြစ်ကိုလည်း ပိုပိုညစ်ညမ်းစေခဲ့သည်။
စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးဒေသအတွင်း နေရာပြောင်းရွှေ့ခံရသည့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ့၏ မူရင်း အဆင့်အတန်းထက် မနိမ့်ကျသော အခြေအနေတခုသို့ ရရှိခံစားရ မည်ဖြစ်သည်။
KDNG>> CPI မှ ပြောင်းရွှေခံရသည့် ကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းအား ယခင်အတိုင်း ပြန်လည်ဖန်တီး ပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ထိခိုက်ခံခဲ့ရသည့် ကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများ၏ အစီရင်ခံစာဖြစ်သော “စံပြမဖြစ်သည့် စံပြကျေးရွာများ (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ)” အစီရင်ခံစာအရ ဒေသခံများသည် လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်စားသောက်ရင် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ပဲ CPI မှ ဝေပေးသည့် အစားအသောက်များအပေါ်တွင်သာ မှီခိုနေကြရသောကြောင့် CPI ၏ ပြောဆိုချက်မှာ လုံးဝ မှားယွင်းနေကြောင်း အစီရင်ခံစာမှ မီးမောင်း ထိုးပြထားသည်။
CSR အစီရင်ခံစာ >> PAP (စီမံကိန်းထိခိုက်ခံရသူ ပြည်သူများ) ၏ ဆန္ဒများကို မိမိတို့ အလေးထားပါသည်။ (…. ) ACHC မှ စီမံကိန်းအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တွင် ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ (… ) ACHC သည် ဒေသခံပြည်သူ များ၏ အခွင့်အရေးဖြစ်သော စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် သိရှိရေးနှင့် စီမံကိန်းအတွင်း ပါဝင်ပတ်သက်ရေး အတွက် အဓိက အလေးထားဆောင်ရွက်သည်….
KDNG>> CPI သည် မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား ဒေသခံ ပြည်သူများအား အသိပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) သဘောထားရယူခြင်း မရှိပဲ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒေသခံပြည်သူများ၏ စာသင်ကျောင်းများ အပိတ်ခံရပြီးနောက်၊ ၄င်းတို့၏ အိမ်ယာမှ အတင်း အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခံရပြီးနောက်၊ ၄င်းတို့ တန်ဖိုးထားသော မြစ်ဆုံဒေသကြီး ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် (သို့မဟုတ်) ၄င်းတို့၏ မြန်မာနှင့် တရုတ်အာဏာပိုင်များထံသို့ ပေးပို့သော ရာနှင့်ချီသည့် သနားခံစာများ အကြိမ်ကြိမ် လျစ်လျူရှုခံရပြီး နောက်တွင် ၄င်းတို့၏ ဆန္ဒမှာ မည်သို့မျှ လေးစားခြင်းမခံရတော့ပါ။
CSR အစီရင်ခံစာ>> စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးသည် သဘာဝနှင့် လူသားဖန်တီးထားမှုနှစ်မျိုးလုံး ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသော (မြစ်ဆုံ) မြင်ကွင်းအသစ်တခုကို ပုံဖော်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုဖန်တီးမှုသည် ဒေသတွင်း ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီး သွားလာရေးလုပ်ငန်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်ရေးအတွက် အလွန်အရေးပါလှသည်။
KDNG >> မလီဇွပ် (မြစ်ဆုံ) သည် ထူးခြားဆန်းကြယ်လှပသည့် ကချင်လူမျိုးများ၏ မွေးရပ်မြေဖြစ်သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ပြည်သူတရပ်လုံးအတွက် အရေးပါသည့် ပြယုဂ်တခုဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော မိမိတို့ ပြည်သူများ တန်ဖိုးထားသော မြစ်ဆုံ နေရာအား တရုတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအားတင်ပို့ရေးစီမံကိန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပုံစံသို့ အသစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးခြင်းမှာ လုံးဝ လက်ခံနိုင်စရာအခြေအနေ မရှိပေ။
စာဂျီ - +၉၅ ၉၄၀၁၅၃၈၂၄၉
အာနန်- +၆၆ ၈၄၈၈၅၄၁၅၄
at 1/09/2014 09:42:00 AM